अनावश्यक खर्च गरेर समृद्धि कसरी हुन्छ ? | रिपोर्टर्स नेपाल
२०७६ असार ५ बिहीबार, ११:१४
अनावश्यक खर्च गरेर समृद्धि कसरी हुन्छ ?
२०७६ बैशाख ९ गते प्रकाशित, l ११:०८
चन्द्र भण्डारी, नेता-नेपाली कांग्रेस : यो सरकारका मन्त्री, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिले गरिब जनतासँग कर उठाएर आफ्नो सुविधाका लागि महँगा हेलिकप्टर, गाडी र आवासमा खर्च गर्ने अनि भाषणमा ठूला–ठूला सपना देखाउने गरेका छन् । यसरी कसरी आउँछ समृद्धि ? तीन खर्ब अनावश्यक खर्च गरेर देशको समृद्धि कसरी हुन्छ ? एउटा प्लेन किन्दा ६ अर्बभन्दा बढी घूस खाने, दूरसञ्चारको एउटा टेलिफोन प्याकेजमा ४ अर्ब हिनामिना गर्ने अनि देशमा कसरी समृद्धि आउँछ ? दूरसञ्चारको ४ अर्बको सामानलाई २१ अर्ब देखाउने अनि कसरी समृद्धि आउँछ ? बिना पैसा मुलुकमा समृद्धि आउँछ ? हावा कुरा गरेर हुन्छ ।
इमानदारिताबिनाको समृद्धि हुन सक्दैन । देश विकास र समृद्धितिर जानुपर्ने हो तर यो सरकारको रवैयाले गर्दा नेपालमा विकासको सम्भावना कम भएको छ । सबैतिर अशान्ति, हत्या, हिंसाको शृंखला बढिराखेको छ । दण्डहीनता बढेको बढेकै छ । गाउँका सोझानिमुखा जनताले सरकार भएको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । सबै क्षेत्रमा अनियमितता छ । घूसखोरी र अशान्तिले मुलुक कसरी समृद्ध बन्छ ।
जसरी पाकिस्तानका प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको शपथग्रहण लिँदा ‘म नेपालका पूर्वप्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको अनुयायी हुँ तसर्थ म त्यस्तै इमानदार बन्न चाहन्छु’ भनेर उदाहरण दिएका थिए । त्यस्तै इमानदारिता अहिलेका नेपालका प्रधानमन्त्रीमा हुनुपर्छ । अनि मात्र मुलुक समृद्ध हँदै जान्छ नत्र अहिलेको जस्तो रवैयाले हुँदैन । उनले भने जस्तै नेपालका अहिलेका नेताहरूले देश र जनताका लागि त्याग गर्नुपर्ने थियो । तर, यहाँ अहिले प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, मन्त्री र नेताहरूले त्यो त्याग देखाउन सक्नुपर्ने थियो त्यो देखिएन । नेपालका नेताहरू अहिले धेरै सुविधाभोगी भएका छन् । स्थानीय तहमा त्यस्तै छ, प्रदेशमा त्यस्तै छ, संघमा झन् डामाडोल भएको छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई अहिले मालामाल भएको छ । आपैंm बजेट लाने आपैmं बाटो खन्ने स्काभेटर किनेर ठेकेदार बनेका छन् । विकासका सबै पैसा बाटोको नाममा ब्रह्मलुट भएको छ । अहिलेको सरकारको ध्याउन्न कसरी कमाउन सकिन्छ ? चाहे एनसेलको कुरा होस्, चाहे ३३ किलो सुन होस्, चाहे बूढीगण्डकी होस् सबैमा भ्रष्टाचार र घूसखोरीका कुरा मात्रै छन् ।
त्यसैले, देश तलदेखि माथिसम्म सबै भ्रष्टाचारमा गएको छ । सरकारका कर्मचारीले पैसा बिना काम गर्न छाडेका छन् । शान्तिसुरक्षाको चुनौती त्यत्तिकै छ । स्थानीय स्तरका जनताले सुशासनको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । देशमा सबै संयन्त्र नियन्त्रणमा गएको छ । नेपाल आर्थिक रूपले लगभग टाट पल्टने अवस्थामा पुगिसकेको छ । त्यसैले नेताहरूमा जबसम्म इमानदारिता हुँदैन जतिसुकै ठूला भाषण र उखान भने पनि विकास समृद्धि सम्भव छैन । यही अवस्थामा र यही तरिकाले नेपाल समृद्ध राष्ट्र बन्न धेरै मुस्किल छ । ०००
‘विद्यार्थीलाई संस्कृत शिक्षा नदिलाए नेपालीको पहिचान गुम्ने’
सरकारले प्रचण्ड बहुमतको अपमान गर्यो : चन्द्र भण्डारी